“Xitaa ma haysto qasaalad oo dharka gacantayda ayaan ku dhaqdaa” – Aqri dhibaatada iyo calool xumada haysata laacibkii hore ee Arsenal – Gool FM
“Xitaa ma haysto qasaalad oo dharka gacantayda ayaan ku dhaqdaa” – Aqri dhibaatada iyo calool xumada haysata laacibkii hore ee Arsenal
Liibaan Fantastic December 24, 2017
Arsenal's Emmanuel Eboue (left) and Barcelona's Lionel Messi (right) battle for the ball
(London) 24 Dis 2017 Emmanuel Eboue oo ah laacib u soo ciyaaray Arsenal intii u dhexeysay 2004 ilaa 2011 ayaa si rasmi ah u sheegay inuu shiiday.
34 jirkaan reer Ivory Coast ayaa sheegay in xaaskiisii hore ay kala wareegtay dhamaan wixii hanti ahaa ee uu shaqaystay intii uu ciyaarayay kubadda cagta.
Emmanuel Eboue oo laga calool xumoonayo dhibka haysta ayaa ku bilaabay hadalkiisa:
“Xaaskeyga ayaa qaadatay dhamaan hantidaydii iyo xitaa gurigii aan ku noolayn oo ku yaala woqooyiga London, hal baarti ayaa ii haray oo alaab aysan oolin, xaqiiqdii layrka waan iska damiyaa marka aan joogo guriga si booliisku uusan u ogaan arinkeyga, waayo xaaskeyga ayaa yeelatay guriga waxayna doonaysaa inay kiraysato”.
“Mararka qaar ma garanayo meesha aan seexanayo caawa, ma joogi karo guriga waayo booliiska ayaa awood sharci iiga saaraya, mararka qaar guri uu leeyahay mid kamid ah asxaabta ayaan dhulka ka seexdaa, waayo wax badan ma haysto, mana lahan qolal kale iyo sariiro lagu seexdo”.
“Waxaan lahaa gawaari kala duwan, laakiin xaaskeygii hore ayaa wada qaadatay, maanta waxaan raacaa gawaarida dadwaynaha, inbadan waxaan ku qasbanaadaa inaan is qariyo, si dadku aysan ii aqoonsan oo aysan ii waydiin xaalkeyga”.
“Ma aanan helin tilmaamo igu filan, dhamaan arimaha dhaqaalaha waxaan u xilsaartay xaaskeyga, labo mar oo kaliya ayaan bangiga lacag u doontay, xitaa markii aan ku sugnaa Turkiga mushaarkeygu wuxuu ahaa 8 milyan oo euro sanadkii, 7 milyan iyada ayaan u soo diri jiray, warqad walba oo ay ii keento sida ay iyadu u rabto ayaan ugu buuxin jiray”.
“Haatan xitaa qasaalad dharka lagu dhaqo ma haysto, maalin walba gacantayda ayaan dharka ku dhaqdaa, taasna waxaan uga mahadcelinayaa ayeeydeey dhimatay oo i bartay sidii aan u dhaqan lahaa dharkeyga, cuntada aan u karsan lahaa markii aan joogay Ivory Coast”.
Mohamed Salah oo ay ka go'antahay inuu ku biiro Real Madrid
Isco oo dareensan in Real Madrid ay qiyaantay kadib kulankii El Clasico